Umrhwebi oza kusebenza kwimarike ye-forex | Ezezimali
Enye yeendlela ezizezinye kutyalo mali zimelwe ngu iimarike zemali zemali. Le nkqubo yotshintshiselwano ngezezimali zamanye amazwe ivumela ukuthatha isikhundla kwezinye zeasethi zemali ezinokubaluleka ngakumbi kwimeko yamanye amazwe. Umzekelo, kwiidola zaseMelika, iifranc zaseSwitzerland, iiponti zaseBritane, ikroner yaseNorway okanye yen yen efanayo yaseJapan. Ngamafutshane, enye indlela yokujolisa kutyalo-mali ukusukela ngoku. Kungcono okanye kubi kunabanye, kodwa kwahlukile.
Ngaphakathi kwimeko yemali yamanye amazwe, ngaphandle kwamathandabuzo ukuba Icandelo lenzuzo idlala indima ebaluleke kakhulu ukusukela ngoku. Ukuba ngutyalomali olunokuvelisa inzuzo ephezulu, nangona oku kuya kufuneka uyazi ukuba usebenza njani kwiimarike zezemali. Ngenxa yokuba zizinto zexabiso eziyimali ezifuna ukufunda ngakumbi ekwenzeni unxibelelwano ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ayothusi into yokuba nayiphi na impazamo yokubala inokuhlawulwa kakhulu ngendlela yelahleko enzima yemali.
Ukusebenza okungakumbi koku urhwebo lwemali ngenxa yecandelo eliqinileyo lokuqikelela lolu hlobo lotyalo-mali. Kwimizuzu nje embalwa ungafumana ingeniso eyomeleleyo ngenxa yomahluko omkhulu kumaxabiso ezemali athengiswa kwiimarike zezemali kwihlabathi liphela. Apho ezinye iimali zithambekele ekuphuhliseni ukungazinzi kunezinye kwaye zibe yinto yokusebenza kwabona batyaleli bathelekisayo kwintengiso. Into ngokungathandabuzekiyo ivelisa umngcipheko omkhulu ekusebenzeni.
1 Ezemali, izibonelelo zokuthengisa kuzo
2 Imida ekusebenzeni
3 Ukubeka iliso kwiintshukumo
4 Imirhumo ifikeleleka ngakumbi kubatyali mali
5 Inkqubo eyahlukileyo yerhafu
6 Umrhwebi we Forex kumashishini
Ezemali, izibonelelo zokuthengisa kuzo
Ewe, elinye lawona magalelo alo makhulu lixhomekeke kwinto yokuba sisixhobo semali ezahlukeneyo kakhulu. Oko kukuthi, unokukhetha phakathi kweendlela ezahlukeneyo ngokuxhomekeke kwimeko yezi asethi zemali. Ukuya kwinqanaba apho unokukhetha khona utshintsho phakathi kwezibini, ezinje ngeedola zaseMelika kunye neyuro. Akunyanzelekanga ukuba usoloko ulandela isikhokelo esinye, kodwa ngokuchaseneyo, unokhetho oluninzi oza kusebenza kulo marike ikhethekileyo kwaye inzima ngexesha elinye. Apho uyakuhlala unemali yelinye ilizwe ebonisa imeko efanelekileyo yokuthatha izikhundla ukusukela ngoku.
Enye yezinto ezilungileyo kakhulu kukuba kutyalo-mali olungahlali ndawonye kwaye oku kuthetha ukuba amaxabiso abo awasoloko efanayo. Ukuba akunjalo, ngokuchaseneyo, bahlala betshintsha kwaye oku kunokwenza ukuba wenze imisebenzi efanelekileyo ngokufumana imali eninzi kwisithuba sexesha elide. Nangona ngesizathu esifanayo, kukushiyela ii-euro ezininzi kwindlela eya kwelinye icala. Ukuya kwinqanaba lokuba ingumthombo weendaba kwiseshoni nganye apho zidweliswe kwiimarike zezemali kwihlabathi liphela.
Le yenye yemiba eya kufuneka ibonwe ngaphambili kwiintshukumo ezenziwa kunye nezinye iimali zamanye amazwe. Ngengqondo yokuba amanye amaziko avumela ukusebenza kule marike ngexesha lokwenyani, ukufaka phakathi kwesi-1% nesi-3% sesiqinisekiso, eyongeza ngakumbi ukuguquguquka kunye nesantya kutyalo-mali. Ngelixa kwelinye icala, kwaye njengakwimarike yezemali, apha unokufaka iiodolo yeka ukumisa ilahleko okanye ukuqokelela inzuzo, esisisixhobo esigqwesileyo kwimidla yomtyali mali omncinci. Ukusetyenziswa kwayo kubaluleke kakhulu ukunqanda iimeko ezingafunekiyo kwimarike yezemali njengoko inzima njengoko injalo.
Kuyimfuneko ukugxininisa ukuba olu hlobo lomsebenzi Zijolise kumagama amafutshane kakhulu okusisigxina ngenxa yezona mpawu zeemarike zezabelo. Nokuba kwiseshoni efanayo yokuthengisa ukunqanda ukuba imeko ibuyiselwe umva kwaye ungaphulukana nemali kwizikhundla ezivulekileyo ngalo mzuzu. Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuvela kwezi asethi zemali kuba inokukunika isikhokelo samanyathelo okungena nokuphuma ngowona mzuzu ungcono.
Ukubeka iliso kwiintshukumo
Enye yezinto eziqhelekileyo kwizenzo zakho ngokuchasene neemali zamanye amazwe yile. Ayothusi into yokuba olu hlobo lwemisebenzi ekhethekileyo ifuna kuzo zonke iimeko uqeqesho olupheleleyo kwimisebenzi eyenziweyo ukusukela ngoku. Ukuya kwinqanaba lokuba kubaluleke kakhulu ukuba a ukuqapha rhoqo isikhundla esivulekileyo kwezinye zezi asethi zemali. Kunye nenyathelo lokukhuthala lokuqokelela inzuzo okanye, apho kufanelekileyo, ukunciphisa umda welahleko ngokuvala isikhundla. Kuya kufuneka ulumke kakhulu kuba ukuhla kwamaxabiso otshintshiselwano kuhlala kunjalo kwaye iimeko ezahlukeneyo zinokwenzeka kutshintshiselwano lwemali.
Ngelixa kwelinye icala, le yimarike yezemali ebalasele ngayo ukungazinzi okukhulu kwaye ingaphezulu kokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwistokhwe kwimarike yemasheya. Ngumahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona mincinci yeemali ezikhethwe ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Apho umzuzu wokuvala imisebenzi ubaluleke kakhulu kuba ukwahluka kwawo kunokubangela ukuba zonke iingeniso zonyuke ngithuba elifutshane kakhulu. Awunyanzelekanga ukuba ulinde inzuzo eyinkunzi ukuba inyuke, njengoko kuhlala kunjalo kutyalo-mali oluqhelekileyo okanye lwesintu.
Imirhumo ifikeleleka ngakumbi kubatyali mali
Ngayiphi na imeko, kuya kufuneka ufune ukusebenza nomrhwebi obonelela ngeekhomishini ezikhuphisanayo ukwenza imisebenzi ibe yinzuzo kunye neziqinisekiso ezikhulu zokuphumelela. Ukusuka kule ndawo yokujonga, unokuzifumana usemarikeni ngezithembiso kunye nokunyuselwa okunokugcina ii-euro ezininzi kwimisebenzi eqhutywa ngezezimali. Ayothusi into yokuba umahluko phakathi kwelinye okanye elinye iziko lezemali liphezulu kakhulu. Ngokude banokufikelela amanqanaba ajikeleze iipesenti ezili-10. Isizathu esongeziweyo sokukhetha umsebenzisi ekubonelela ngemida efanelekileyo yokulamla.
Kungenxa yokuba yintoni malunga nokuphela kosuku ukuba unako ukunciphisa iindleko kule mi sebenzi ikhethekileyo. Apho umahluko omncinci unokuchaphazela impumelelo yomsebenzi. Njengoko iyimveliso yezemali enoburhalarhume ngakumbi kunaleyo yesiqhelo: iimali zotyalo-mali, ukuthenga nokuthengisa izabelo kwimarike yemasheya, iimali ezithengiswayo ezitshintshisanayo ... isigxina sabo.
Inkqubo eyahlukileyo yerhafu
El unyango lweeodolo lwemali yamanye amazwe eziswe ngeenkonzo ezisebenza ngezi asethi zemali ayihlukanga kuleyo ifunyenwe ngawo nawuphi na omnye umyalelo, ukusebenzisa indlela ebizwa ngokuba yi "FIFO" kubalo lweenzuzo ezinkulu kwintengiso, oko kukuthi, kuthathelwa ingqalelo ukuba ziyenziwa uthengise imali yomhla wokufumana kwakhe mdala ngaphandle kweakhawunti yangoku kunye nequmrhu apho umthengi abeke imali leyo. Ngokusisiseko, le ndlela isekwe kwinto yokuba into yokuqala iyinto yokuqala ukuphuma, kungoko uvavanyo lwayo lulungelelaniswe nenyani yentengiso, kuba isebenzisa ixabiso ngokusekwe kwiindleko zamva nje.
Kwelinye icala, unyango lwayo lwerhafu lugcina iimeko ezifanayo nakwezotyalo-mali lwemveli. Nangona ngumahluko onokukhokelela kutshintsho lwemali oluchazayo iikhomishini kunye nenkcitho kulawulo okanye kulondolozo ngaphezulu. Ngomyinge ophakathi onokufikelela kwi-0,10% kwisixa-mali osityalileyo. Ukusuka kolu luvo, kukusebenza okuthe kratya, kodwa ngokungathandabuzekiyo kunokuphazanyiswa nokwenziwa komsebenzi ngamnye owenziwa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi. Ngokungaqiniseki okungakumbi malunga nesiphumo sokugqibela sentshukumo yotshintshiselwano.
Umrhwebi we Forex kumashishini
I-Bankinter iphuhlise iprojekthi entsha eza kusebenza kwimarike yemali yezemali. Ngokwazisa kwangoku nje ngokuthengisa umthengisi wayo omtsha weenkampani ezikuvumela ukuba usebenze iiyure ezingama-24 ngosuku, ngemali nangemisebenzi engaphambili. Injongo yomthengisi omtsha kukubonelela ngeenkampani zabathengi zebhanki eyona nkonzo yemali yedijithali egqibeleleyo kwimarike imisebenzi yexesha langempela nakweyiphi na intengiso emhlabeni. Enye yeenzuzo zale nkonzo kukuba umrhwebi wamkela ii-odolo eziya kwenziwa ngokuzenzekelayo, emini okanye ebusuku, nje ukuba ixabiso lemali lifikelele kwinqanaba eliceliweyo.
Umrhwebi ohlaziyiweyo uyafumaneka kwiinkampani, kwaye uvumela ukuthengwa kunye nokuthengiswa kweemali ezingama-25 kwimarike yendawo kunye nakwimakethi yekota, nge-inshurensi yokutshintshiselana ngomhla omiselweyo nakwimeko ebizwa ngokuba yi "flexible", ngexabiso elimiselweyo ngelixesha Ixesha lesivumelwano. Ukongeza, unokwenza ugqithiso phakathi kweeakhawunti kwiimali ezahlukeneyo kwaye wenze ugqithiso lwamanye amazwe, ngaphandle kokulinda izinga lotshintshiselwano. ukulungisa. Eyona micimbi ibalulekileyo yale nkonzo intsha esele ifumaneka kwiinkampani. Njengento entsha ngokubhekisele kwezo zijolise kwabanye abamkeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Umrhwebi oza kusebenza kwimarike ye-forex
I-Acciona, elinye lamaxabiso kunye nenqaku lobugcisa elifanelekileyo